सरकार, सबै महिला सडकमै आउनु परेको हो ? « Janata Samachar
सरकार, सबै महिला सडकमै आउनु परेको हो ?
प्रकाशित मिति : 10 August, 2018 3:34 pm
अपराधको दुनियाँमा एकाध घटनाले पाउने प्राथमिकता र ग्लामर मात्र होइन, यहाँ त यसैले पाइरहेको निरन्तरताले पक्कै मानवसभ्यतामै मोसो दलेको छ
संसारमा धेरै मनोवृत्तिका मान्छे बस्छन् । पुरुष र महिलाले बनाएको रंगीन दुनियाँ नै मनोरम संसार हो । महिला र पुरुषले कामको सहजताका लागि बाँड्फाँड गरेको भूमिका पनि छ । तर अविकसित मुलुकमा पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला पुरुषको दास बन्नु पर्ने भन्ने मानसिकता अझै कायमै छ । जातका आधारमा मूल्यांकन गर्नेहरु पनि छन् । क्षमताको लेखाजोखा नहुँदा कयौँ प्रतिभावानहरु ओझेलनमा परेकै छन् । अझ महिला पुरुषको दबाब मा हुनुपर्छ भन्ने मनोग्रन्थिले महिलाको क्षमता सधैँ दबिने गरेको छ । पुरुष भनेका कुरा मान्नु नै महिलाको जिन्दगी हो भन्ने भन्ने गलत मानसिकताले घर गरेका कारण समाज रुपान्तरणमा समस्या छ ।
संसारले विकासमा मारेको फड्कोमा गर्व गरिरहँदा हामी भने अझै छोराछोरीको सुरक्षा माग गर्दै सडकमा कुर्लिरहेका छौँ । काम गर्न छाडेर नाराबाजीमा समय खेर फालिरहेका छौँ । यो विडम्बनाबाट मुक्त हुन जरुरी छ । एकमहिनामा २३ वटा बलात्कारका घटना भए । तर सरकारले आफ्नो बोली फुटाउन सकेको छैन । अन्य देशमा बलात्कारका घटना हुँद कार्यकारी प्रमुख गम्भीर बन्छन् । अपराधीलाई कारबाही गर्न आदेश दिन्छन् । उस्तै परे नैतिकताका आधारमा राजीनामासमेत दिन बाध्य हुन्छन् । बलात्कारीलाई फाँसी वा आजीवन काराबास हुन्छ । हामीकहाँ फाँसीको व्यवस्था त छैन, तर अपराधीलाई कारबाही गर्न जुन कानुन बनाइएको छ, त्यो कार्यान्वयन त कता हो कता, पक्रेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दासमेत राज्यपक्षका उपल्ला ओहोदामा बसेकाहरुले उस्तै परे तगारो हाल्न बेर लगाउँदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा, चेली कसरी सुरक्षित रहने ? सन्तानको पिरलोले हरेक आमाबुबाको मनमा डरको घर गरेको छ । हरपल बच्चाबच्चीको चिन्तामा सचेत रहनु पर्ने अवस्था बनेको छ । चेलीबेटी बलात्कृत भइरहँदा पक्कै समाजमा छोरीहरु असुरक्षित छौँ । अन्याय, अभाव, अन्योल, अव्यवस्था, कुशासन मौलाएको छ । पुरुष र महिला दुबैले यो साझा समस्या हो भनेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
छोरीहरु बाबु, दाजु, गुरु, अनि न्याय दिने प्रहरीबाटै बलात्कृत भइरहेका छन् । बलात्कार जस्तो कुकृत्यमा लुकाउन हत्या गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले साँच्चै बलात्कारीलाई कारबाहीको दयारमा ल्याएन भने महिलाहरुले बलात्कारी र अपराधीलाई महिलाले भोगेजस्तै पीडाको दहमा डुबुल्की मारेर समाजमा अनुहार देखाउन नहुने बनाइदिने भन्दै महिलाको जुलुश सडकमा आयो भने के जवाफ दिने सरकार ?
बलात्कृत हुने र मारिनेको उमेर हेर्दा हरेक उमेरमा बालबच्चा अपराधीको सिकार बनेका छन् । छोरी, बहिनी, आमामाथि नै कुकृत्य र जघन्य अपराध बढिरहेको छ । समाजमा बढ्दो करणीका घटनाले पुरुषहरूलाई पनि कलंक लागेको छ कि सबै पुरुष त्यस्ता त होइनन् । तर अपराधको दुनियाँमा एकाध घटनाले पाउने प्राथमिकता र ग्लामर मात्र होइन, यहाँ त यसैले पाइरहेको निरन्तरताले पक्कै मानवसभ्यतामै मोसो दलेको छ । अब छोरी जोगाउने मात्र होइन, छोरालाई पनि अपराधको दुनियाँबाट मुक्त बनाएर सचेत, सभ्य र छोरीचेलीमाथि सद्भाव राख्ने बनाउनु अभिभावकको पनि दायित्व हो । हरेक अभिभावकले छोरी जोगाउन जति चिन्ता गरेका छन् त्यति नै छोरालाई सभ्य बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । छोरालाई घरमा हुने भरथेगले कतै छोरा बिग्रिरहेको त छैन, घर, समाज र राष्ट्रको चिन्ता हुनुपर्छ ।
अर्काकी छोरी जिस्काउँदा अभिभावक चुप बसिदिँदा छोरामा कुलत बढ्न सक्छ । र, दूराचारमा जोडियो भने उसको मात्र होइन, परिवारकै जिन्दगीमा कलंक पोतिन्छ भनेर हामीले अब छोरालाई पनि समवेदित बनाउने बेला भएको छ । मोबाइलमा हेरिने अश्लील भिडियोका कारण पनि विकृति, विसंगति बढेको छ । हामीले छोरीलाई संस्कार सिकाइरहँदा छोराले चलाउने स्मार्ट फोन, उसले इन्टरनेटमा हेरेका साइटहरु अनि उसका संगत कोसँग छ भनेर सचेत बन्नै पर्छ । खासगरी आमाले पनि छोरीलाईजस्तै छोरालाई चासो दिनु पर्छ ।
गर्भदेखि, कोक्रो र वृद्ध अवस्थासम्मका महिला चौतर्फीरुपमा असुरक्षित बनिरहेका छन् । महिलाले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति केही सावधानी अपनाउन सक्छन् । पहिरनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । आचरण, बोलिचाली, हिँडाइ, हेराइले पनि प्रभाव पार्छ पक्कै । तर जसलाई विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ, कहिलेकहीँ त्यो विश्वासको पर्खाल भत्किन पनि सक्छ । अपरिचित व्यक्तिलाई तुरुन्त विश्वास नगरौँ । चिनेको होस् या नचिनेको व्यक्तिलाई कहिलेकहीँ आत्मीयता नदिउँ । ७० प्रतिशत छोरीचेली आफन्तबाटै असुरक्षित भेटिनुले छोरालाई संस्कार सिकाउने विषय पहिलो बन्नैपर्छ ।
छोरीबहिनीलाई घुम्न जाँदा, घर बाहिर या घर भित्र रहदा सहज र सुरक्षित रहनसक्ने वातावरण निर्माण नै हाम्रो पहिलो दायित्व हो । अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउन छाडेर मायाममता देखाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ । आजीवन काराबास या फाँसीको माग यसै उचालिएको होइन । आजीवन काराबास र आफ्नै मृत्युको भय कसलाई हुँदैन र ? पक्कै चेलीमाथि कुदृष्टि लगाउनेको कमी हुनेछ । यहाँ त प्रमाण अभावका नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति भइरहँदा पो आपराधिक मानसिकता बढिरहेको छ । जुन दिन बलात्कारीलाई कठोर सजाय व्यवस्था हुन्छ, पक्कै मानिसमा अझै डर रहन्छ र महिलामाथि हुने अपराधमा कमी आउनेछ । अन्त्यमा, छोरीहरु बाबु, दाजु, गुरु, अनि न्याय दिने प्रहरीबाटै बलात्कृत भइरहेका छन् । बलात्कार जस्तो कुकृत्यमा लुकाउन हत्या गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले साँच्चै बलात्कारीलाई कारबाहीको दयारमा ल्याएन भने महिलाहरुले बलात्कारी र अपराधीलाई महिलाले भोगेजस्तै पीडाको दहमा डुबुल्की मारेर समाजमा अनुहार देखाउन नहुने बनाइदिने भन्दै महिलाको जुलुश सडकमा आयो भने के जवाफ दिने सरकार ?
निर्मला हत्याकाण्डः आईजीपी खनालले मुख खोले
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको